दिनानुदिन नेपाली सामाजिक संन्जाल को दुरुपयोग बढ्दै ! फेसबुकमा भाइरल बनाइदिएकाले तनावमा रहेकी उनले विष सेवन गरेर आ*त्मह*त्या…. – सुदूरखबर डटकम
दिनानुदिन नेपाली सामाजिक संन्जाल को दुरुपयोग बढ्दै ! फेसबुकमा भाइरल बनाइदिएकाले तनावमा रहेकी उनले विष सेवन गरेर आ*त्मह*त्या….
भीमदत्तनगर, २४ भदौ । झण्डै एक महीनाअघि कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाकी– एक २३ वर्षीया युवतीले वि*ष सेवन गरिन् । आफन्तसित पर्यटकीयस्थल लिङ्गा घुम्न गएका बेला स्थानीय तीन युवाले उनको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल बनाइदिएकाले तनावमा रहेकी उनले विष सेवन गरेर आ*त्मह*त्या गरेकी थिइन् ।